Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy miova ny datim-pifidianana fa amin’ny 7 novambra” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy miova ny datim-pifidianana fa amin’ny 7 novambra”
“Fantatsika ny tetiandro napetraky ny governemanta: amin’ny 7 novambra ny fifidianana fihodinana voalohany, amin’ny 19 desambra ny fihodinana faharoa. Tsy miala amin’izany tetiandro izany ny governemanta.” hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Mahazoarivo, afakomaly, taorian’ny fihaonany tamin’ny iraky ny Vondrona afrikanina, i Ramtane Lamamra.Miroso amin’ny fanomanana ny fifidianana isika. Atao ny hahatanteraka ny tetiandro rehetra, voahaja hatramin’izao. Fotoana izao hirosoana amin’ny lalana mankamin’ny fifidianana, ary tsy miova amin’izany isika. Voalaza tamin’ny fomba ofisialy, ary manaja ny lalàmpanorenana sy ny didy fanapahan’ny HCC tamin’ny 25 mey izany.
Ilaina ny fitoniana sy ny filaminana
Faniriany ny fitoniana, ny filaminana, ny fandriampahalemana… “Tsy maintsy atevenintsika hatrany ny anjara andraikitra maro isan-karazany raisina amin’izao fotoana izao”, hoy izy. Mba hahazoana mametraka tokoa ny fomba fijery vaovao izany, indrindra hahazoana mametraka eto amin’ny firenena ny fahafahan’ny mpifidy, indrindra ny fanajana azy: izy irery ihany no haneho ny safidiny hametrahana ny ho filoham-pirenena eo amin’ny fitondrana tian’ny maro anisa.
“Ny zava-misy: ny hevitra, tera-bary”, hoy ihany izy. Malalaka ny olom-pirenena, indrindra ireo kandidà nankatoavin’ny HCC haneho ny heviny momba ny zava-misy.
Ao anatin’ny firenena mandala ny demokrasia, malalaka ny fanehoan-kevitra. Zava-dehibe ny fahazoan’ireny kandidà ireny maneho ny heviny momba ny raharaha. Tsy midika izany fa marina sy mitombina avokoa ny lazainy.